Godina Arsii Aanaa Ziwaay Dugdaatti kirkira Lafaa Mudateen Nami 300 Qe’ee Baqate
Godina Arsii Aanaa Ziwaay Dugdaatti balaa kirkira lafaa gidduu kana mudataa jiruun name 300 ol qe’ee akka baqate bulchiinsi aanichaa beeksise. Boonsoo Olii Itti Gaafatamaan waajjira siyaasaa VOA’f balaan ta’een kun irra deddeebiin torbee kana guutuuf mullataa akka jiru himan.
Obbo Boonsoo Olii; Aanaa Ziwaay Dugdaatti Itti gaafatamaa siyaasa aanaati. Kirkira lafaa Aanaa Ziwaay ganda Biitee jedhamu keessatti gidduu kana mullataa jiruun waan sodaanneef, jiraattonni ganda kanaa akka bakka ka’an taasisaa jirraa jedhu.
Angawi mootummaa Ziwaay Dugdaa Obbo Boonsoon sababuma kanaan namootni 300 ol qe’ee buqqa’anii akka jiran himanii bulchiinsi aanaas jara kana manneen barnootaa keessa qubsiisee jira jedhan. Dabalaniis kirkirri kun naannoo sanitti ka beekamu tahus, inni dhiyeenyaa kun garuu torbee kaasee walitti aansuun mullataa akka jiru ifoomsan.
Proofeeser Attaalaay Ayyelee; Yuuniversitii Finfinnee Damee Qorannoo Ji’oo Fiiziksii fi Hawaatti Itti gaafatamaa fi akkasumas ogeessa waa’ee kirkira lafaati. Waan gidduu kana Ziwaay Dugdaatti mudataa jira jedhame meeshaan kirkira lafaa biyyattii keessatti mudatu safaru hin agarree jedhu.
Yoo ibsanis, “Nubiratti, meeshaadhaan mullataa hin jiru, kun jechuun achitti homtuu ta’aa hin jiruu miti, mudatus nami akka qe’ee buqqahuuf waan geessisuu miti akka yaada kootti. Garuu nama achii kaasuun gaarii tahee, rakkoo biraaf nama saaxiluun gaarii mitiidha waan adda hin baaneef. Kanaaf odeeffannoowwan baayyeen ilaalamuu qabuu jechaa kiyya. Meeshaan nuti qabnu kirkira biyyattii keessatt itahu mara ni galmeessa, Finfinnee kaasee haga biyya alagaa ka jiru maraa galmeessuu dandaha” jedhu
Piroofeeser Attaalaay, Aanaan Ziwaay Itiyoophiyaa keessaa bakka kirkirri lafaa itti mudata jedhamee yaadamu keessa ka jirtu tahuus dubbataniiru.